ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားမီးအိမ် မှအကောင်းဆုံး ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားမီးအိမ် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
SHINYU LIGHT CO., LTD. ထူးချွန်ထက်မြက်ဒီဇိုင်နာများ, အင်ဂျင်နီယာ, ပို့ကုန်စီးပွားရေးသမား, ဈေးကွက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအင်အား numbers မ​​ျားရှိသည်။ သုတေသနနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲခြင်း, နိုင်ငံခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး, အရည်အသွေးပေါ်အလေးအနက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတဆင့် ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားမီးအိမ် အထူးအနုပညာနှင့်လက်မှုပညာဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပုံစံ - A2 30W-60W
LED အလင်း Lumens:3600/7200/9600/12000/14400/19200/24000 lm(ရိုက်ပါ.5700K)
Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်:IP66，ပါဝါ IP65
CNS ပေါက်ကွဲမှုအားဖြင့်-အထောက်အထားလက်မှတ်,ထွ DM IIB T4(ဇုန် ၁ အတွက်ဖြစ်သည်,ဇုန် ၂).
အချိုးကျမှန်ဘီလူးပုံစံ.Beam ထောင့်အမျိုးအစား 118 ဒီဂရီ.
စိတ်ကြိုက်သံမဏိ adapter,1 နှင့်အတူသုံးနိုင်သည်/၂~၃/၄ NPT-အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပအံသွားကိုအသုံးပြု။ သက်သေပြအဆစ်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.ledlightfixtures.org/my/explosion-proof-lamp.html
အကောင်းဆုံး ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားမီးအိမ် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထားမီးအိမ် ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊